Erdogan: Cidna fasax uga qaadan meyno danteena – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Erdogan: Cidna fasax uga qaadan meyno danteena
Reccep Tayyip Erdogan Madaxweynaha Dalka Turkiga, ayaa maanta sheegay in Turkey ay bisha July heli doonto habka difaaca gantaalaha S-400 ee Ruushka uu sameeyo, taasi oo xiisad ka dhex abuurtay dalkiisa iyo Mareykanka oo ay ka wada tirsan yihiin NATO.
“Arrinta ku saabsan S-400 waa arrin si toos ah ula xiriirta madaxa-banaanideena kamana laaban doonno” ayuu Erdogan ku sheegay khudbad laga sii daayey taleefishinka.
“Insha Allah, keenista S-400 waxay billaaban doontaa July” ayuu yiri Madaxweynaha Turkiga.
“Si ay uga gudubto baahideeda amni, Turkey cidna fasax ugama baahna, iskaba daa inay u hoggaansato cadaadis.”
Madaxweyne Turkiga, ayaa wacad ku maray inuu xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u adeegsan doono inuu yareeyo xiisadda labada dal, marka uu kula kulmo shirka G-20 ee magaalada Osaka ee dalka Japan, toddobaadkan.
Previous articleIran oo Cunaqabateyn Cusub lagu soo Rogay
Next articleMareykanka oo sheegtay in uu duqeyn ku dilay Xubin katirsan Al-Shabaab.
Qaraxii Afaraad iyo Shanaad oo ka dhacay Muqdisho Xildhibaano iyo Askar...